Nepali Hot news नेपाली ब्लु फिल्म Making Blue Film in Nepal - VideoEXA (Video Heaven) - Your ultimate video source!
Nepali Hot news नेपाली ब्लु फिल्म Making Blue Film in Nepal
Description:किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने भए पनि उनीहरूले गर्ने यौन व्यवहारमा रोकमात्र लगाइन्छ । अहिले युवाहरूको विवाह हुने उमेर बढी हुँदै गए पनि यौनेच्छा मेट्ने बाटोचाहिँ खुला गरिँदैन । हस्तमैथुन पनि त्यसैको चपेटामा परेको छ र यस विषयमा कतिपय गलत धारणा पनि छन् । यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्..(more)
किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने भए पनि उनीहरूले गर्ने यौन व्यवहारमा रोकमात्र लगाइन्छ । अहिले युवाहरूको विवाह हुने उमेर बढी हुँदै गए पनि यौनेच्छा मेट्ने बाटोचाहिँ खुला गरिँदैन । हस्तमैथुन पनि त्यसैको चपेटामा परेको छ र यस विषयमा कतिपय गलत धारणा पनि छन् । यौनआनन्द पाउने उपायहरूमध्ये यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो । यौनसम्पर्कमा यौनाङ्गहरू नै एक-आपसमा घर्षण गराइन्छ । यस्तो घर्षण अरू कसैको यौन अङ्गमा गराउँदा मात्र होइन, हातले गराउँदा पनि आनन्द आउँछ । सिद्वान्ततः यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो । त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने कुरा भन्न मिलेन । कतिपय गलत धारणा वा भ्रमहरू व्याप्त भए पनि हस्तमैथुनले स्वास्थ्यसम्बन्धी हानि-नोक्सानी गर्दैन ।
04:24ॐ Hara Hara Mahadev (NEPALI VERSION) (BHAJAN)- (HQ)176 views
02:10Most Hot , Kiss & Sexy Scenes from Nepali Movie7262 views
02:04ling ka pura na khulna | The opening of the penis is not complet..431 views
03:16nepali remix lok pop song new modern nepal limbu2868 views
01:48TOP5Nepali Actress Wardrobe Malfunction.(नेपाली अभिनेत्रीको भि..400 views
02:29Hot & Sexy Nepali Acress Namrata Shrestha5061 views
00:47Murder | Emraan Hashmi & Mallika Sherawat "Hot Bed" Scene ! Boll..1554 views
01:50Ebola Not Present Yet In Cambodia | Health Hot News Today 2014109 views
04:03Bollywood News | Hot Indian Model Bikini Photoshoot1057 views
04:06Nepali hot dace in home4281 views
03:21SEXY HOT Pakistani news anchor Zaara Khan in tight grey leggings..6512 views
03:52News Fails Funny Bloopers LIKE AND SUBSCRIBE FOR HOT VIDIO THANKS275 views
01:23Nepali Hot & sexy Model - Singer | Jyoti Thapa Magar | Leaked Vi..6417 views